डेंगु नियन्त्रणमा बेवास्ता, जनस्वास्थ्य समस्याको रूप लिदै ! – Public Health Concern(PHC)
in जनस्वास्थ्य जानकारी, जनस्वास्थ्य बिशेष, महामारी, स्वास्थ्य समस्या
धरान : डेंगु रोग नियन्त्रण गर्न तीनै तहका सरकारले बेवास्ता गरेका छन्। धरानमा डेंगु फैलिएको तीन महिना बित्न लाग्दा पनि नियन्त्रणमा चासो नदेखाएपछि स्थानीयले सरकारको आलोचना गरेका छन्। बिरामी संख्या ६ हजारभन्दा बढी पुगेको छ। यसबाट धरानका २ लाख जनाको ज्यान जोखिममा परेको स्थानीयको भनाइ छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै सरकारको हेलचेक्र्याइँका कारण डेंगुको चपेटामा परेको धरान–१५ का राम राईको भनाइ छ। कांग्रेसका सुनसरी जिल्ला सभापति राजीव कोइरालाले पनि सरकारको बेवास्ताप्रति आपत्ति जनाए। हजारौं स्थानीय बिरामी हुँदा पनि सरकार चुप लागेर बसेको उनको गुनासो छ। रोग नियन्त्रण र बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्न उनले सरकारसँग माग गरे।
कोरोना भाइरस रोकथाममा पर्यटन मन्त्रालय : हेल्थ्ग डेक्स देखि Aircraft Disinfection सम्म को १२ बुदे निर्णय
३ हजार जनाको उपचार बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भइरहेको छ। ९ सय ५५ जनाले विजयपुर अस्पताल र अन्यले वीरेन्द्र मेडिकल हल, श्रेष्ठ मेडिकल, मञ्जु श्री पोलिक्लिनिक, धरान इमेजिङलगायत स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराइरहेका छन्। यी संस्थामा दैनिक बिरामीको भीड लाग्ने गरेको छ। सरकारले डेंगु परीक्षण गर्न आवश्यक किट प्रतिष्ठानलाई पर्याप्त नपठाएकाले निजीमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको पीडितको गुनासो छ। उनीहरूका अनुसार निजीमा उपचार महँगो छ।
डेंगुकै कारण असार २८ गते धरान–१५ की ४३ वर्षीया मनु सुनुवारको मृत्यु भएको थियो। एडिज एजिप्टाई तथा एडिज अल्बो पिक्टस नामक पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट डेंगु फैलिएको डाक्टरले बताएका छन्। धरान–१५ मा देखिएको डेंगु संक्रमण २० वटै वडामा फैलिएको छ। बालबालिका र वृद्धवृद्धा रोगको चपेटामा परेका छन्।
प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डा. पशुपति चौधरीले डेंगुका बिरामी अत्यधिक आउने गरेको बताए। उनका अनुसार १ हजार १ सय ४५ बिरामीमा डेंगु एमएस १ देखापरेको छ। यसलाई रोग खतरनाक मान्निछ। सिकिस्त बिरामी दैनिक १५ देखि २० जनासम्म भर्ना हुने गरेको उनले बताए। रोग नियन्त्रण गर्न सरकारले दीर्घकालीन योजना चाहिने उनको भनाइ छ।
डेंगु संक्रमित पोथी लामखुट्टे सफा पानीमा मात्र बस्छ। पानी भरिएको भाडा, खाल्डाखुल्डीमा जमेको पानी र घरकै फ्रिजको पछाडि जमेको पानीमा लामखुट्टेले अण्डा पार्ने गरेको डाक्टर बताउँछन्। त्यसबाटै संक्रमित लामखुट्टेको संख्या बढेका कारण डेंगु फैलिएको धरान उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रामबाबु यादवले बताए। खानेपानी अभावका कारण स्थानीयले खुला भाडामा पानी जम्मा गर्ने गरेका छन्। त्यही कारण संक्रमित लामखुट्टेको संख्या बढेको उनले बताएको खबर अन्नपूर्ण दैनिक ले छापेको छ /
Tags: Control Of DengueDengueJanswaasthya SarokaarPublic Health ConcernPublic Health ProblemPublic Health Situation Of Nepalpublic health update
अर्थ मन्त्रालयले जारी गर्यो आब २०७६/०७७ श्रावण १ देखि लागू हुने स्थायी कर्मचारीहरुको तलबमान ! (सम्पुर्ण तलबमान समेटिएको)
आफ्नो पार्टनर लाई कसरी खुसी राख्ने ? बिशेष टिप्स सहित !
ल्याबका स्वास्थ्यकर्मीलाई राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा जागीरको अबसर ! (बिज्ञापन सहित)